Ruqsadaha horumarinta softiweer bilaash ah iyo furan: dhaqanka wanaagsan | Laga soo bilaabo Linux
Ruqsadaha horumarinta softiweer bilaash ah iyo barnaamij furan: dhaqammo wanaagsan
Linux Post Ku Rakib | | Lagu taliyay, dhowr
Una shatiga softiweerka, marka si guud loo hadlo, waxaa lagu tilmaami karaa a qandaraaska u dhexeeya qoraa (abuuraha) mulkiilaha xuquuqda isticmaalka iyo qeybinta badeecada la abuuray iyo iibsadaha ama isticmaalaha ka mid ah.
Sidaa awgeed, dhammaantood rukhsadaha Qeexitaan ahaan, waxay ku lug leeyihiin fulinta taxane ah shuruudaha iyo xaaladaha waxaa aasaasay qoraaga (abuuraha). Taasi waa, a shatiga softiweerka, wax kale ma aha xaq u leedahay in la isticmaalo barnaamijka hoos imanaya xuduudaha qaarkood ee la oggol yahay.
1 Noocyada Ruqsadaha Software-ka
1.1 Alaabooyinka softiweer ee bilaashka ah, ee aan ahayn bilaash ama furfuran software
1.2 Wax soo saarka software lahaansho iyo ganacsi
1.3 Noocyada kale ee Shatiyada Software-ka
1.4 Qeexitaanno kale oo la xiriira
2 Shati Software iyo Bilaash Bilaash ah
2.1 Software Bilaash ah
2.2 Il furan
3 Dhaqan wanaagsan
3.1 a) Ku dar liisanka ilaha furan
3.2 b) Ku dar liisanka dukumintiyada
Noocyada Ruqsadaha Software-ka
Xaaladaha qaarkood, ruqsadaha softiweerka badanaa aasaas muddada muddada waxay yeelan doonaan isku mid, tan iyo markii ay noqon karaan joogto ah ama xaddidan. Qodob kale oo u muuqda inuu qaabeeyo astaamahooda ayaa ah baaxadda juqraafi ahaan, taasi waa, dhulka lagu dabaqi doono shuruudaha iyo xaaladaha aasaasay; maaddaama waddan kasta sida caadiga ah uu leeyahay xeerar u gaar ah oo ku saabsan shatiga softiweerka.
Ruqsadaha badiyaa way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay Nooca barnaamijka si loo daboolo, taas oo ah, nooc kasta oo Shati iyo / ama Software ah ayaa qeexaya midka kale. Ka mid ah Shatiyada la og yahay iyo / ama Software-ka waxaan ka xusi karnaa:
Alaabooyinka softiweer ee bilaashka ah, ee aan ahayn bilaash ama furfuran software
Shatiga Aandonware: Waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu ku adeegsado barnaamijka softiweerka ah (bilaash dhammaan xuquuqda daabacaadda) dadweyne uuna caddeeyay qoraaga Fududeynta xaqiijinta wax ka beddelka iyo qaybinta dadka kale.
Shatiga Daryeelka: Waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha xuquuq la mid ah tan liisanka Freeware; laakiin ku casuumay isaga inuu sameeyo tabaruc aan qasab ahayn ama xaalad dejin ah, iyadoo laga doorbidayo deeqaha lagu taageerayo sababaha bani'aadamnimada, sadaqada iyo ololeyaasha kale ee la xiriira. Guud ahaan u oggolaanshaha isticmaalaha inuu nuqul ka sameeyo oo wax ka beddelo iyadoon xaddidnayn.
Shatiga Crippleware: Waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu ku isticmaalo software-ka noocyada iftiinka (Lite), taas oo ah, shaqooyin xaddidan marka la barbar dhigo nooc buuxa ama horumarsan.
Shatiga Donationware: Waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha xuquuq la mid ah tan liisanka Freeware; laakiin casuumaad isku mid ah si loo sameeyo tabaruc aan qasab ahayn ama shuruudaysan, iyada oo laga doorbidayo sii wadida horumarinta dalabka la sheegay.
Shatiga Freeware: Waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha xaq u lahaanshaha inuu isticmaalo oo uu nuqul ka sameysto softiweer marka loo eego shuruudaha uu ku qeexay qoraaga barnaamijkaas, isagoo aan u oggolaanayn wax ka beddelkiisa ama iibintiisa dhinacyada saddexaad xaalad kasta ha ahaatee
Shatiga Kaadhadhka: Waxay u oggolaaneysaa adeegsadaha xuquuq la mid ah tan liisanka Freeware; laakiin casuumaad isku mid ah si aad ugu dirto warqad boosta, qaab qasab ah ama qaab qaboojin ah, oo ku aaddan horumarinta sheyga.
Shatiga Shareware: Waxay u oggolaaneysaa isticmaalaha inuu adeegsado softiweerka waqti xaddidan ama joogto ah, laakiin leh shaqooyin xaddidan. Kaas oo la hawl gelin karo marka la bixinayo nooc buuxa.
Wax soo saarka software lahaansho iyo ganacsi
Un Software lahaansho badiyaa waa iska caadi a Lahaanshaha iyo software xiran, maadaama rukhsad bixintu xaddideyso nuqul, wax ka beddelid iyo dib u qaybinta xuquuqda isku mid ah, illaa dhamaadka isticmaalaha (iibsaduhu) uu siiyo qaddar cayiman qoraaga inuu xaq u leeyahay inuu sidaas sameeyo.
Halka a Barnaamijka ganacsiga Waxay leedahay ruqsad bixisa ugu badnaan, bixinta isla sidii loo isticmaali lahaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira Software ganacsi oo noqon kara mid bilaash ah ama lahaansho lehmaadaama ay jirto Software aan bilaash ahayn oo aan ganacsi ahayn.
Intaa waxaa sii dheer, illaa xad ama gebi ahaanba, ruqsadaha softiweerka berrinkii Lahaansho, la xiray, ama software ganacsi Kuwani waxaa lagu heli karaa qorshayaal kala duwan, oo aan ka xusi karno:
Ruqsad siinta (Mug)
Liisammada Alaabta oo faahfaahsan (Tafaariiq)
Ruqsad siinta elektarooniga ah alaab gaar ah (OEM)
Sidoo kale, marka a Isticmaalaha ugu dambeeya badanaa waxay helaan a Liisanka oo faahfaahsan waxaa badanaa loo yaqaan: Dhammaadka Heshiiska Shatiga Isticmaalaha (EULA) o Dhammaadka Heshiiska Shatiga Isticmaalaha (EULA). Ingiriisiga waxaa badanaa loo yaqaan Heshiiska Shatiga Dhamaystirka-Isticmaalaha (EULA).
Noocyada kale ee Shatiyada Software-ka
Laga soo bilaabo bogga dadweynaha: Kaas oo aan ku jirin walxaha Xuquuqda daabacaadda oo u oggolaanaya adeegsiga, koobiyeynta, wax ka beddelka ama dib-u-qaybinta faa'iido ama maya
Nuqul Kaas oo loo adeegsaday alaabooyinka softiweeriga ah ee Free, kuwaas oo shuruudaha qaybintoodu aysan u oggolaanayn dib-u-qeybiyeyaasha inay ku daraan wax xaddidaad dheeri ah markay qaybinayaan ama wax ka beddelayaan, sidaa darteed nooca la beddelay sidoo kale waa inuu ahaadaa mid bilaash ah.
Laga soo bilaabo software bilaash ah: Midka loo adeegsaday alaabooyinka aan ahayn Software-ka Bilaashka ah, laakiin wuxuu oggolaanayaa adeegsiga, koobiyeynta, qaybinta iyo wax ka beddelka shakhsiyaadka aan macaash doonka ahayn.
Qeexitaanno kale oo la xiriira
Patent: Waa xuquuqo gaar ah oo ay dowlad ama hay'ad u damaanad qaaday hal abuurka shey cusub (la taaban karo ama aan la taaban karin) oo awood u leh in si warshadeysan looga faa'iideysto wanaaga codsadaha muddo xaddidan.
Xuquuqda Qoraalka ama Xuquuqda Qoraalka: Foomka ilaalinta ee ay bixiyaan sharciyada ka jira waddamada badankood qorayaasha shaqooyinka asalka ah oo ay ka mid yihiin suugaan, riwaayado, muusig, farshaxan iyo shaqooyin aqooneed, labadaba la daabacay iyo inta la sugayo.
Shati Software iyo Bilaash Bilaash ah
Software Bilaash ah
El Barnaamijka bilaashka ah waa software-ka ixtiraamaya isticmaalaha iyo xorriyadda bulshada. Marka si guud loo hadlo, waxay ka dhigan tahay in dadka isticmaala ay leeyihiin xorriyadda socodsiinta, nuqul, qaybinta, barashada, wax ka beddelka iyo hagaajinta barnaamijka.
Arimaha Software Free iyo gaar ahaan ku saabsan Ruqsadaha la oggolaaday (la caddeeyay / la ansaxiyay) maamulka ugu sareeya ee arintan ku saabsan waa Aasaaska Barnaamijka Bilaashka ah (FSF). Qeybteeda u heellan Ruqsadaha la oggolaaday iyo qaybta Ruqsadaha la oggolaaday o Liiska Liisamada (ee barnaamijka softiweerka, dukumiintiyada iyo shaqooyinka kale, la jaan qaada ama aan la socon Shatiga Guud ee Dadweynaha (GPL), oo aan bilaash ahayn), ee Ururka GNU waxaa lagu xusay kuwa kale oo badan, kuwa hoos lagu sharaxay:
Ruqsadda Guud ee GNU: Caadi ahaan waxaa loo yaqaan GPL - GNU, waxaana loo adeegsadaa inta badan barnaamijyada GNU iyo in ka badan kalabar xirmooyinka Barnaamijka Bilaashka ah. Midka ugu dambeeya ayaa ah nooca lambarka 3aad, inkasta oo qaybtii hore ee 2aad wali la adeegsanayo.
Ruqsadda Guud ee Yar ee GNU: Caadi ahaan waxaa loo yaqaan 'LGPL - GNU', waxaana loo adeegsadaa qaar ka mid ah (maahan dhammaan) maktabadaha GNU. Midka ugu dambeeya waa nooca 3aad, inkasta oo qaybtii hore ee 2.1 ka mid ah wali la adeegsanayo.
Liisanka Guud ee Affero: Caadi ahaan loo yaqaan 'AGPL - GNU', waxay ku saleysan tahay GNU GPL, laakiin waxay ka kooban tahay qodob dheeri ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay la falgalaan barnaamijka ruqsadda haysta shabakad si ay u helaan koodhka ilaha barnaamijkaas. Kii ugu dambeeyay waa nooca 3.
Ruqsadda Dukumintiga Bilaashka ah ee GNU: Caadi ahaan loo yaqaan FDL - GNU ama GFDL, waa nooc Ruqsad Daabacaad ah oo loogu talagalay buugaagta, buugaagta wax laga barto ama dukumiintiyada kale. Ujeeddada laga leeyahay ayaa ah in la hubiyo in qof kastaa uu xor u yahay inuu nuqul ka sameeyo oo uu dib u qaybiyo, iyadoo la beddelayo ama aan wax laga beddelin, ganacsi ama aan ahayn. Kii ugu dambeeyay waa nambarka nambarka 1.3.
Software-ka Meel furan waxaa loola jeedaa software-ka koodh isha ayaa la dhigay dabeecadda bilaash adduunka oo dhan waxaana laga siiyaa rukhsad u sahlaysa dib u isticmaalkeeda ama la qabsiga duruufaha kala duwan. Way ka duwan tahay inta badan Software Free, maaddaama tan dambe ay difaacayso xorriyadda adeegsadayaasha iyo bulshada la qabsanaysa, halka ay Il furan waxay qiimeysaa inta badan faa'iidooyinka la taaban karo ee ma ahan mabaadi'da xorriyadda ee ay bixiso Software Free.
Arimaha Il furan iyo gaar ahaan ku saabsan Ruqsadaha la oggolaaday (la caddeeyay / la ansaxiyay) maamulka ugu sareeya ee arintan ku saabsan waa Hindisaha Isha Furan (OSI). Qeybteeda u heellan Ruqsadaha la oggolaaday waxaa lagu xusay kuwa kale oo badan, kuwa hoos lagu sharaxay:
BSD - Faqradda 3aad
FreeBSD - Faqradda 2
Shatiga horumarinta iyo qeybinta guud
Qaybta qorrax madoobaadka 2.0
OSI sidoo kale waxay leedahay a Liiska Liisamada OSI oo dhammaantood la ansaxiyay. Qaar badan oo ka mid ah Furan Shatiga Furan caan yihiin, si ballaaran loo isticmaalo ama ay leeyihiin beelo adag oo sidoo kale ay ansixiyaan Aasaaska Barnaamijka Bilaashka ah (FSF).
Maqaalkeena, waxaan soo qaadanay tusaale ahaan Dhaqannada wanaagsan uuraysatay oo shaaca ka qaaday "Xeerka Hindisaha Horumarinta" del Bangiga Horumarinta Maraykanka, baaxadda Barnaamijka Shatiga, taas oo ay tahay in la qaato marka la soo saarayo alaabada software-ka (aaladaha dhijitaalka ah), gaar ahaan bilaash iyo furan.
Waxaa ka mid ah dhaqamada wanaagsan ee ay bixiyaan, marka la eego Barnaamijka Shatiga waa kuwa hoos ku xusan:
a) Ku dar liisanka ilaha furan
Isaga oo tixraacaya taladiisa, waa:
"... MIT, kaas oo xorriyad u siiya isticmaaleyaasha kale inta ay u tiirinayaan abuuraha asalka ah; liisanka Apache 2.0, oo aad ugu eg MIT laakiin sidoo kale bixiya deeq cad oo ah xuquuqda lahaanshaha ee ka-qaybgalayaasha ilaa isticmaalayaasha; iyo Ruqsadaha GNU GPL, taas oo u baahan qof kasta oo qaybinaya lambarkaaga ama shaqada ka dhalanaysa inuu sidaas sameeyo isagoo ilaalinaya isha iyo shuruudaha isku mid. Cashuur bixiyayaashu waxay bixiyaan deeq deg deg ah oo ah xuquuqda lahaanshaha".
b) Ku dar liisanka dukumintiyada
"Waxaan kugula talineynaa isticmaalka rukhsadaha iskaa wax u qabso ee ruqsad siinta dukumiintiyada qalabka. The CC0-1.0, CC-BY-4.0 iyo CC-BY-SA-4.0 tusaale ahaan waa rukhsad furan oo loo isticmaalo agab aan softiweer ahayn, laga bilaabo xogta illaa fiidyowyada. Ogow taas CC-BY-4.0 iyo CC-BY-SA-4.0 looma isticmaali karo barnaamijka softiweer. Qalabka ay soo saartay IDB xilligan, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho Nidaamka 'Commons Commons IGO 3.0' Attribution-NonCommercial-NoDerivative (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)".
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad aqriso kuweenna 2 maqaallo hore oo la xiriira Mawduuca waxaan kaaga tagaynaa xiriiriyeyaasha hoose: "Dhaqan wanaagsan oo lagu horumariyo Software bilaash ah oo furan: Dukumiinti" y "Tayada Farsamada: Dhaqammada wanaagsan ee horumarinta Software-ka Bilaashka ah".
Waxaan rajeyneynaa taas waa "waxtar yar post" ku saabsan «Buenas prácticas» berrinkii «Licencias» si loogu isticmaalo «Software libre y abierto» horumarsan, ayaa dan weyn iyo dan u leh, dhammaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta weyn ee baahinta nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo koraya ee codsiyada iyo wixii loogu talagalay «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Ruqsadaha horumarinta softiweer bilaash ah iyo barnaamij furan: dhaqammo wanaagsan
ProtonVPN, waa ikhtiyaar aad u fiican in VPN lagu isticmaalo Linux